Taorian’ny nahafantaran’izy ireo ny marina rehetra mikasika ny tany etsy Anosizato dia nitory ilay karana nampiditra ny filohan’izy ireo Rafanomezantsoa Jean Nirina eny am-ponja izy ireo. Eny anivon’ny lehiben’ny fampanoavana mihitsy no nanateran’izy ireo ny fitoriana. Nandefasana taratasy fitarainana ihany koa ny eo anivon’ny fiadidian’ny repoblika. Ho azy ireo mantsy dia fanampenam-bava tsy hivoahan’ny marina no antony nampidirana ny filohany eny am-ponja. Tsiahivina fa efa nisy ny fotoana nampiatoan’ny fanjakana ny asa fanamboarana fotodrafitrasa teny amin’io kianja filalaovam-baolina Anosizato io. Ankehitriny, misy milaza fa misy manao asa an-tsokosoko indray ao an-toerana koa iantsoan’izy ireo ny tompon’andraikitra. Mikasika ny fisamboran’ny zandary eny Betongolo ny filohan’ny HAFARI tamin’ny naha-talen’ny fampielezan-kevitry ny kandida filoham-pirenena iray azy moa dia fantatra fa nahazo fahafahana madiodio ny tenany, didy nivoaka tamin’ny 19 martsa lasa teo.
Marigny sy Pati